Nhau - Chii chinonzi zvigunwe zvemunwe?
Chigunwe chemunwe chinoshandiswa kuchengetedza chigunwe chakakuvara. Basa rayo guru kuchengetedza chigunwe uye kudzora chigunwe kubva pakukombama. Uye zvakare, inogona zvakare kubatsira munwe kuti upore mushure meArthritis, kuvhiyiwa, kuvhiyiwa, nezvimwewo, kana zvimwe zvikonzero. . Chakagadzirwa zvigunwe zvigunwe zvinowanzo gadzirwa nesimbi kana plastiki. Homemade splints inogona kugadzirwa kubva kunenge chero chinhu chakatsetseka, kusanganisira huni.
Kana chigunwe chakatsemuka chisinga gadziriswe, zvinogona kukonzeresa kupora kwemapfupa.
Zvigunwe zvakatyoka kana kupwanywa zvinogona kuzvimba uye kurwadza. Rudzi urwu rwekukuvara rwunoitika nekupwanya, kupwanya, kana kukotama chigunwe. Minwe yakaputsika uye sprains hazviwanzo zvinoda kukandwa. Zvigunwe zveminwe zvinogona kutengwa pamusoro pekambani kana kuiswa nevezvehutano.
Chidimbu chemunwe chakaputsika ndiko kuputsika. Muchidimbu, tepi munwe wakakuvara uye munwe wepedyo usina kukuvara pamwechete. Tepi inochengetedza zvigunwe zviviri kuti zvidzivirire kubva pakukombama. Iyi yakapusa minwe yekupwanya matekiniki inowanzo shandiswa kwemunwe ligament kukuvara. Izvo zvakare zvakakodzera kurapwa kwe knuckle dislocation kana sprain kukuvara kunokonzerwa nemunwe jamu.
Minwe yakamonerwa kazhinji haidi kukanda.
Iyo tepi inofanira kuiswa pamusoro uye pazasi yenzvimbo yakakuvara. Kana chindori chikakuvadzwa, munwe mudiki unofanirwa kushandiswa pakugadzira tepi. Izvi zvinodzivirira munwe mudiki kubva mukukuvara. Zvigunwe zvakapetwa hazvifanirwe kushandiswa kutsemuka.
Vanhu vakapfeka zvigunwe zvemunwe.
Nekukuvara kwetendon kana kuputsika, shandisa zvimedu zveminwe. Iyo static splint inoenderana nechimiro chemunwe uye inodzivirira munwe painopora. Iyi splint inobvumira zvigunwe zvemunwe zvekupora zvakakwana. Static splints inowanzo gadzirwa nesimbi inoshanduka ine yakapfava lining kune rimwe divi. Mimwe mitsara inongobatirirwa pasi peminwe, nepo mimwe mitswe inoputira zvachose zvigunwe kuti zvidzivirire zvakare zvigunwe.
Yakarongedzwa mabara inogona kushandiswa kana akasiyana mamiriro ekurapa akamanikidza majoini eminwe ari padyo nenzara kukotama achienderera. Splint uye chigunwe uye pfuura nepakati peakabatana. Inomanikidza majoini kuti arambe ari munzvimbo isina kubvumidzwa achibvumira mamwe majoini kukotama zvakasununguka. Mazhinji stacking splints akagadzirwa epurasitiki.
Dynamic zvigunwe zvigunwe zvinopa yakanakisa kureba-kurerukirwa kwenguva refu kweArthritic yakakomberedzwa minwe. Simbi, furo, uku kupenya kunoitwa kwepurasitiki. Varwere vanowanzoipfeka husiku pavanorara. Chishandiso chemuchirimo chinogona kugadzirisa kutambanudza kweminwe.
Chinozvigadzirira chakanamirwa pasi pechigunwe chakakuvara kuti ubate zvinyoro zvidiki nekukuvara. Iyo yemapazi-yakadzika-pasi nzimbe saizi yakanaka uye chimiro cheyakagadzirwa imba. Kana munwe wakakuvara wakaremara uye uchiri nemarwadzo kana chiveve mushure meawa rimwe chete rekuzorora, unofanirwa kutsvaga kurapwa.